Gịnị kpatara ndị Afrịka ga-eji gụpụtara ụmụ ha akwụkwọ? - AFRIKHEPRI
Ịha nhata agbụrụ ndị mmadụ - Anténor Firmin (PDF)
Akwụkwọ Ukwu nke Reiki Tibet (PDF)
The Dhammapada - Okwu nke Buddha (PDF)
Lelee Nina (2016)
Negro-Mmepe nke Africa bụ Prọfesọ Coovi Gomez
NIGERIA NA-AKW ANDKWỌ NA NWAANY MAN NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA 2018
Africa na-esi nri, ọwa a raara nye nri Afrika
CAMEROON: Obedi: Kadji "ọ bụ nnukwu mmadụ, nnukwu mmadụ"
Nnukwu ụgbọ elu ndị agha Afrika nke mbụ nke 100
Na itinye ike nke ugbu a - Eckhart Tolle (Audio)
Ihe ise gbasara psychoanalysis - Freud (Audio)
Maka ndụ ime mmụọ kariri ma nwekwuo - Joseph Murphy (Audio)
egwu ỤLỌ NNA
Ịgụ maka ụmụaka
I meghachiri "Ihe mere Afrika ji gua akwukwo ..." Sekọnd ole na ole gara aga
OA na-ekwukarị na ‘izochiri onye isi ojii ihe, ị ga-etinye ya n’akwụkwọ’. Ọ bụ ụzọ isi kwuo na ndị isi ojii anaghị agụ akwụkwọ ma ọ bụ na ha anaghị agụ akwụkwọ. Ọ gaghị ekwe omume ndị mụrụ anyị ịgụrụ anyị ụtọ maka ịgụ akwụkwọ n'ihi na ha enwetabeghị ihe nketa a, ewezuga mmadụ ole na ole gụrụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị colonial. Ọ dị mkpa icheta na mgbe a gbasasịrị ichi eze, na 60s na 70s, imirikiti ndị Africa amaghị akwụkwọ ma ọ bụ, ka anyị kwuo, anaghị asụ asụsụ ndị ọdịda anyanwụ. Ọzọkwa, n’adịghị ka ndị Africa America nke meworo ka omume (ụzọ ịbụ nke) nke Euro-Americans, dị ka ịnweta ọba akwụkwọ n’ụlọ, ọtụtụ ndị Africa ka na-ala azụ ịgụ. N'ihi na a na-ewerekarị ya dị ka "ihe ọcha"». Ịla oge.
Readinggaghị agụ akwụkwọ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna, o doro anya na ịchọrọ ihe kacha mma maka ụmụ gị. Chọrọ ka ha nwee ihe ịga nke ọma na ụlọ akwụkwọ ma tobe onwe gị. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ itinye odidi n'akụkụ gị iji nyere ha aka, ị gaghị enwe ike ịchekwa agụ.
Readinggụ ihe na iche n’echiche
Ịgụ akwụkwọ nye ụmụaka na-enyere aka ịzụlite ma kpalie ha pụrụ ichetụ n'echiche.
Na ọrụ ya ụmụ dị afọ isii ruo afọ iri na otu, Gilles-Marie Valet na-agwa anyị nke a:
« Schoollọ akwụkwọ ahụ na-amụta ịgụ ihe, mana anaghị akụzi ụtọ ịgụ ihe. Agbanyeghị, anyị maara mkpa ọ dị ịgụ na ọgụgụ isi, ọgụgụ isi na mmepe mmetụta nke ụmụaka, ọkachasị mgbe afọ isii gachara, ebe agụụ ịmata ihe gbasara mmekọahụ na-eme ka mmadụ nwekwuo ịmata ihe. Readinggụ na-enye azịza, mana ọbụna karịa, na-akpali agụụ, ịghọta, ịzụlite ebe nchekwa na iche echiche, ndi n’enye ikike ime nrọ ma karie imeputa uzo ohuru[…] Ọ bụ n'ụzọ bụ isi na-abụghị ụlọ akwụkwọ na-azụ ụtọ ịgụ akwụkwọ na-azụlite. Agbanyeghị, ịgwa ndị mmadụ ihe dị n'ịgụ ihe abụghị ihe doro anya. Nke a bụ n'ihi ma ntụgharị na njehie. Anyị maara òkè nke ihe ndị nne na nna: mgbe nke ikpeazụ na-amasị ịgụ ma ọ bụ na-ejide akwụkwọ ahụ ma ọ bụ ndị dere ya na-akwanyere ùgwù, ha na-akwalite mmasị nwa ha nwere. N ’ihi na ọ gha enweela omume na ọ pleasureụ ige akụkọ, n’oge ịba ụra dịka ọmụmaatụ, ọ ga-emecha chọọ ịchọ akwụkwọ nke ya. »
Gịnị bụ echiche?
Agche echiche bụ akụkụ a nke uche anyị nke anyị nwere ike iji anya nke uche hụ ihe onyoonyo n’isi anyị, ka anyị hụ ọhụụ ọdịnihu anyị, nke okike anyị. Ọ bụ anya mmụọ nsọ. Ọ na - enye anyị ohere ịgafe oke anyị ma kwenye na ọ gaghị ekwe omume n'ihi na ihe ọ bụla nke uche mmadụ nwere ike ịhụ ma chepụta n'echiche ya, ọ nwere ike nweta.
Mbuta Nsaku Kimbembe, onye edemede na ọkacha mara na ọdịnala Kongo, dere gbasara echiche:
« Ọ bụ mmegharị nke na-egosipụta onwe ya kachasị n’isi nke mmadụ. Mụ mmadụ niile na-eche, nrọ na ihe dị iche iche. Mmegharị a siri ike nke na ọ na-enye ụdị ihuenyo dị na njedebe nke ụwa a na-ahụ anya na nke a na-adịghị ahụ anya, ebe ihe oyiyi na-abịa n'onwe ha. Uche a na-enweta ma dekọba ọtụtụ ihe anyị na-anwa igosipụta, ịkọwa ma ọ bụ mezuo. Tupu amata ihe obula (ihe okike), mmeghari n’ime. »
N'ime akwụkwọ magburu onwe ya edepụtara Onye na-agụ obere, na-agụ ihe niile ndụ, onye edemede ọhụụ Rolande Causse na-enye nkọwa nke isi banyere mkpa echiche dị na ụmụaka:
“Ọ bụ n'echiche ahụ ka nwatakịrị ga-achọ ihe ndị dị n'echiche na nrọ ya. Uche a bu nzuzu na-eme ya: ọ buru na anyi atule ihe anya n’ile anya n’ichiri ihe n’echebe ahu, o buru n’uche ichoro ka ị banye ma obu gbadata. Na-enweghị ya, enweghị ndụ ga-ekwe omume.
Maka ụmụaka, akwukwo di ezigbo mkpa, nke na-abịa ịrụ ọrụ, na-emepụta ma na-eme ka ọdịiche ahụ dịkwuo mma, na ihe ngosi ndị a ma ama na-arụ ọrụ bara uru site n'inye ha ihe mara mma na mma ha na-amaghị. Akwụkwọ ọ bụla bụ maka obere obere ihe nkiri nke ha na-ahụ ihe ndị dị na ha na-ewu ụdị mmadụ na mmekọrịta ha.
Ihe a na-eche n’echiche bụ ngalaba a nke na-enye mmadụ ohere idu ndụ ya, iche echiche, iche echiche, imepụta ihe. Ka ọ dị ugbu a n'ihe banyere nyocha, sayensị, nkà ihe ọmụma, ọ na-arụ ọrụ dị mkpa ebe ahụ. Mana ọ dị ka akwara: ọ bụrụ na ọ naghị akpụ akpụ, ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, ọ na-akpọnwụ. A zụlitere echiche a, zụlite, mụbaa. Echiche na-eduga ya n'ime ihe omume a na-emegharị. Ime ka echiche ụmụaka na-arụ ọrụ - yana afọ niile - dị oke mkpa. Akụkọ ndị ahụ gụpụtara ha "kpọghee", tọpụ ma mee ka uche onye na - echekwa ihe omimi banyere ịkọ akụkọ.»
Banyere ike nke akụkọ ifo, na ọkachasị akụkọ ifo ndị Afrịka, nke a bụ ajụjụ ọnụ dị egwu Oumar Nianankoro Diarra.
«Akụkọ ifo bụ ụlọ akwụkwọ na-azụ onye ahụ. Akụkọ ifo teta nwatakịrị ahụ»
Maka ndị nne na nna si Africa ndị chọrọ iwebata ụmụ ha ka ha gụọ akwụkwọ mana amaghị etu esi eme ya, akwụkwọ Rolande Causse na-adọrọ mmasị. Ga-ahụ ndụmọdụ ọkachamara ...
Banyere pụrụ ichetụ n'echiche…
N'ime ihe nkiri a na-eme anwansi nke Belle Isle, Morgan Freeman, onye na - egwuri egwu onye ode akwukwo, Monty Wildhorn, na - ekwu maka echiche a bu "Ike kachasi ike emeela ka mmadu nweta".
Ọ bụrụ na ọ bụ site n'echiche pụrụ iche na mmadụ nwere ike chepụta ma nweta ikike okike ya, nke a na-esitekwa n'ịgụ akwụkwọ, ndị nne na nna ndị Africa, site n'inye ụmụ gị akwụkwọ, site na ịgụ ha n’akụkọ ifo, ị ga - eji nwayọ kpalie echiche ha wee zụlite ọgụgụ isi ha. Nke a ga - enyere ha aka ma emesịa na ndụ ha ma ọ kachasị n’oge agụmakwụkwọ.
Amụrụ ọtụtụ ụmụaka site na onyinye na onyinye dị ịtụnanya, na ịgụ akwụkwọ, n’ihi na ọ na-akpali echiche na okike, ga-enyere ha aka igosipụta ike ha nile; kamakwa nrọ.
Nke a kpatara na, n’uche m, ndị Afrịka ga-agụrụ ụmụ ha akwụkwọ, ma mee ka ha nwee uto ịgụ ihe - Readinggụ akwụkwọ ụmụaka kwa abalị -
N’uhuruchi ọ bụla, mgbe ọ bụla m nọrọ, m na-eji nkeji iri ruo iri na ise gụọrọ m obere ụmụnne m tupu ha lakpuo ụra. Ọ bụrụ na inwere ụmụaka, Rollande Causse na-echeta nke a:
Agụrụ m ha akụkọ, akụkọ nwere akụkọ ha nwere ike ịkọwa ma mata onwe ha. Enwere akwụkwọ anyị zụrụ na ndị ọzọ anyị ji gbazite ọbaakwụkwọ. Ana m agbalị ịgụ ha akwụkwọ na isiokwu ndị masịrị ha.
Otu nnyocha sayensị na-adịbeghị anya egosipụtala uru nke ịgụrụ ụmụaka. Gụọ} Achọpụtala ugbu a, ịgụ akwụkwọ ụmụaka na-agbanwe ụbụrụ ha. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụ na ala-afọ, Rollande Causse na-echetara nke a:
« Taa, ọba maka ụmụaka, "akwụkwọ ụmụaka", na - esite na ọnwa mbụ ndị a na - atọ ụtọ ebe nwatakịrị ahụ, na - emegide onye na - agụ akwụkwọ, na - atụ anya, na - emetụ ya aka, na - esi isi ma na - enwe ụda olu. Ihe akwukwo a buru diri ya ihe egwuregwu, ihe egwuri egwu n'etiti ndi ozo. Ma nwa na-eto, na-eje ije na-ekwu okwu.
Mgbe ahụ, ọ na-eji ihe osise mara mma, akụkọ, oge na-enye ọṅụ. Ọ na-achọta asụsụ ma họrọ okwu na puns. Akụkọ na ihe oyiyi kpaliri echiche ya ma me ka o nwekwuo uche ya. A haziri ọgụgụ isi ya. Site n'ememe nke ọgụgụ, ọba ndị a na-adọrọ mmasị na-eme ka ọ chọọ ịma ụzọ isi kọwaa ihe ịrịba ama ha dị omimi, ọchịchọ ịmụ otú agụ.»
41,04€ dị na ngwaahịa
Ejiri 3 mee ihe site na 41,04 €
ka nke Eprel 5, 2020 10:49
Ụbọchị mwepụta 2013-08-17T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2013-08-17T00:00:01Z